Apokalypsy Betroka - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
22 novembre 2011 admin analamnga park, betroka, tanora
Ny Sabata 19 Novambra 2011 lasa teo no notanterahina tany Betroka ny famaranana ny fampianarana boky Apokalypsy izay natao tany an-toerana. Tao aorian’ny kaoferansa lehibe niarahana tamin’ny pasitera Mailhol, dia 345 no nanapa-kevitra ny hiroso tamin’ny ranon’ny batisa. Ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol hatrany no nitarika ny fotoana tamin’izany.
Andron’ny Tanora Apokalypsy
Tontosa ny Alahady 20 Novambra lasa teo, tetsy Analamanga parc ny andron’ny tanora apokalypsy na “Journée de la Jeunesse Apocalypse” andiany voalohany. Tanora maherin’ny 700 manerana ny rezionaly Antananarivo no tonga nanatrika izany fotoana izany. Ny tanjona tamin’ity hetsika ity moa dia ny hampivondronana ireo tanora eo anivon’ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara. Maro be ireo lalao teny an-toerana toy ny lalao baolina kitra, ny basket, tsipy kanety be, karaoké sy ireo maro hafa. Nanokatra izany fotoana izany tamin’ny fomba ofisialy ny vadin’ny Ray aman-dReny pasitera Mme Aurela Mailhol niaraka tamin’ireo ireo ray aman-dreny eo anivon’ny fiangonana Apokalypsy.
Na dia teo aza ny orana dia tamin-kafaliana sy firavoravoana tanteraka no namaranana ny tournoi de foot sy basket-ball ary petanque nandritra ny tapany hariva, tamin’izany fotoana izany koa no nanolorana ny amboara ho an’ireo nivoaka mpandresy tamin’ireo lalao ireo.
← Fampianarana Apokalypsy
Batisa tany Tsiroanomandidy →
Une pensée sur “Apokalypsy Betroka”
Fitiavana vita sedra ny antsika ry tanora a! tsy laitran’ny varatra sy ny havandra! misaotra e!